“ဒီဇင်ဘာဆုတောင်း အနေနဲ့ ပြည်သူတွေ မနာလို စွပ်စွဲခံရခြင်း တိုက်ခိုက်ခံရခြင်း ကင်းဝေးကြပြီး သူတော်ကောင်းတရားလေးပါးကို ကျင့်သုံးနိုင်ကြဖို့ ဆုတောင်းပေးလာတဲ့ ယဥ်လက် ” – myannewsmedia.com
“ဒီဇင်ဘာဆုတောင်း အနေနဲ့ ပြည်သူတွေ မနာလို စွပ်စွဲခံရခြင်း တိုက်ခိုက်ခံရခြင်း ကင်းဝေးကြပြီး သူတော်ကောင်းတရားလေးပါးကို ကျင့်သုံးနိုင်ကြဖို့ ဆုတောင်းပေးလာတဲ့ ယဥ်လက် ”
CelechitThuပရိသတ်ကြီးရေ ယဥ်လက်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖိုက်တာမင်းသမီးတွေထဲကတစ်လက်ဖြစ်ပေမယ့် အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီး ပြည်သူတွေဘက်မရပ်တည်ခဲ့တဲ့အနုပညာရှင်ထဲကတစ်ယောက်ပါ။ သူမအနေနဲ့ စစ်တပ်ရဲ့ဖိတ်ကြားမှု​ေ​တွမှာ ဆက်တိုက်ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တာကြောင့် ပြည်သူတွေကboycottပြုလုပ်တဲ့ အနုပညာရှင်စရင်းထဲပါဝင်ခဲ့တာပါ။
ဒီနေ့မှာတော့”လူတွေရဲ့ ဘဝမှာ လေ .. ရွေးချယ်မှုတွေပြုလုပ်ရတော့မယ်ဆိုရင်..ကိုယ့်ရဲ့ အဆိုးဆုံးအခြေနေနဲ့ အပြိုလဲခဲ့ရဆုံးအခိုက်တန့်တွေမှာ ..အနားကနေ ထွက်မသွားပဲ အမြဲ ရှိပေးတဲ့သူ..ဒါမှမဟုတ် အဲ့လိုအဆိုးဆုံးအခြေနေမျိုးမှာမှ အနီးဆုံးကို ရောက်လာပေးတဲ့သူ..ဒီလိုလူမျိုးနဲ့ ဆုံခွင့်ရတယ်ဆို လက်လွှတ်မပေးလိုက်ရဘူး တဲ့ ..🤍🖤သင်ရော… အဲ့လိုလူမျိုးနဲ့ဆုံတွေ့နေရပြီလား? ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုလူမျိုးအဖြစ် ရှိနေတာလား??
အသက်ရှင်စဉ်ကာလအတွင်း .. လူသားတိုင်း..အေးချမ်းပျော်ရွှင်ရတဲ့ဘဝလေး ကိုယ်စီ ပြန်လည် ထူထောင်နိုင်ကြပြီး … ကျန်းမာစွာ , ပြည့်စုံစွာ, တန်ဖိုးရှိစွာ ,တန်ဖိုးသိစွာ ,အတုယောင်ကင်းစွာ , သစ္စာရှိစွာ နဲ့ မိမိ အမြတ်တနိုးချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေနဲ့အတူ ..စစ်မှန်သောပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ ဘဝကိုဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ..🙏🏻 အပြုံးတုတွေဝေးပါစေ..အသက်အန္တရာယ်ကင်းပါစေ..🙏🏻
မနာလိုခြင်း စွပ်စွဲခံရခြင်း တိုက်ခိုက်ခံရခြင်း ကင်းပါစေ.မေတ္တာ ဂရုဏာ မုဒိတာ ဥပေက္ခာ သူတော်ကောင်းတရားလေးပါးကို ကျင့်သုံးနိုင်ပြီး .. အပြုံးတွေ ပြန်လည်အသက်ဝင်နိုင်ကြပါစေရှင် ..🙏🏻”ဆိုတဲ့စာ​နဲ့အတူသူမရဲ့အလှပုံတွေတင်ကာ ဒီဇင်ဘာဆုတောင်းကိုတောင်းပေးခဲ့တာပါ။
“ဒီဇင္ဘာဆုေတာင္း အေနနဲ႔ ျပည္သူေတြ မနာလို စြပ္စြဲခံရျခင္း တိုက္ခိုက္ခံရျခင္း ကင္းေဝးၾကၿပီး သူေတာ္ေကာင္းတရားေလးပါးကို က်င့္သုံးႏိုင္ၾကဖို႔ ဆုေတာင္းေပးလာတဲ့ ယဥ္လက္ ”
CelechitThuပရိသတ္ႀကီးေရ ယဥ္လက္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ဖိုက္တာမင္းသမီးေတြထဲကတစ္လက္ျဖစ္ေပမယ့္ အာဏာသိမ္းၿပီးတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး ျပည္သူေတြဘက္မရပ္တည္ခဲ့တဲ့အႏုပညာရွင္ထဲကတစ္ေယာက္ပါ။ သူမအေနနဲ႔ စစ္တပ္ရဲ႕ဖိတ္ၾကားမႈ​ေ​တြမွာ ဆက္တိုက္ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့တာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြကboycottျပဳလုပ္တဲ့ အႏုပညာရွင္စရင္းထဲပါဝင္ခဲ့တာပါ။
ဒီေန႔မွာေတာ့”လူေတြရဲ႕ ဘဝမွာ ေလ .. ေ႐ြးခ်ယ္မႈေတြျပဳလုပ္ရေတာ့မယ္ဆိုရင္..ကိုယ့္ရဲ႕ အဆိုးဆုံးအေျခေနနဲ႔ အၿပိဳလဲခဲ့ရဆုံးအခိုက္တန္႔ေတြမွာ ..အနားကေန ထြက္မသြားပဲ အၿမဲ ရွိေပးတဲ့သူ..ဒါမွမဟုတ္ အဲ့လိုအဆိုးဆုံးအေျခေနမ်ိဳးမွာမွ အနီးဆုံးကို ေရာက္လာေပးတဲ့သူ..ဒီလိုလူမ်ိဳးနဲ႔ ဆုံခြင့္ရတယ္ဆို လက္လႊတ္မေပးလိုက္ရဘူး တဲ့ ..🤍🖤သင္ေရာ… အဲ့လိုလူမ်ိဳးနဲ႔ဆုံေတြ႕ေနရၿပီလား? ကိုယ္တိုင္အဲ့လိုလူမ်ိဳးအျဖစ္ ရွိေနတာလား??
အသက္ရွင္စဥ္ကာလအတြင္း .. လူသားတိုင္း..ေအးခ်မ္းေပ်ာ္႐ႊင္ရတဲ့ဘဝေလး ကိုယ္စီ ျပန္လည္ ထူေထာင္ႏိုင္ၾကၿပီး … က်န္းမာစြာ , ျပည့္စုံစြာ, တန္ဖိုးရွိစြာ ,တန္ဖိုးသိစြာ ,အတုေယာင္ကင္းစြာ , သစၥာရွိစြာ နဲ႔ မိမိ အျမတ္တႏိုးခ်စ္ခင္ရတဲ့သူေတြနဲ႔အတူ ..စစ္မွန္ေသာေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြနဲ႔ ဘဝကိုျဖတ္သန္းႏိုင္ၾကပါေစ..🙏🏻 အၿပဳံးတုေတြေဝးပါေစ..အသက္အႏၲရာယ္ကင္းပါေစ..🙏🏻
မနာလိုျခင္း စြပ္စြဲခံရျခင္း တိုက္ခိုက္ခံရျခင္း ကင္းပါေစ.ေမတၱာ ဂ႐ုဏာ မုဒိတာ ဥေပကၡာ သူေတာ္ေကာင္းတရားေလးပါးကို က်င့္သုံးႏိုင္ၿပီး .. အၿပဳံးေတြ ျပန္လည္အသက္ဝင္ႏိုင္ၾကပါေစရွင္ ..🙏🏻”ဆိုတဲ့စာ​နဲ႔အတူသူမရဲ႕အလွပုံေတြတင္ကာ ဒီဇင္ဘာဆုေတာင္းကိုေတာင္းေပးခဲ့တာပါ။
← ” သမီးလေး Scarlettဖြိုးထွန်းနဲ့သူ့ရဲ့ပုံတွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ကာ အယောင်ဆောင်ပြီး အသုံးပြုနေတဲ့TikTokအကောင့်တု ရှိနေကြောင်း ထုတ်ပြောလာတဲ့ AhBoy ”
” အိိမ်‌ခြေ(100)အတွက်ဆန်နှင့်စားစရာများအ​ပြင်ကျန်းမာရေးအတွက်အကူညီလိုအပ်နေသူများအတွက်ထောက်ပံ့ငွေစုစုပေါင်း(10)သိန်းကျော်ကိုလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဒိန်းဒေါင်” →